मलेसियामा नेपाली कामदारले पाउदैनन् सरकारले तोकेको तलब ! तोकेको तलब कति ? – List Khabar
Home / समाचार / मलेसियामा नेपाली कामदारले पाउदैनन् सरकारले तोकेको तलब ! तोकेको तलब कति ?
admin November 18, 2021 समाचार Leaveacomment 56 Views
Previous विद्यालय र कलेज अनिश्चितकालका लागि बन्द
Next यी ब्यक्ति जसले इन्स्योरेन्सको ३८ करोड पाउन यस्तो सम्म गरे, त्यो थाहा पाउदा तपाईको सात्तो जानेछ !